Gadda Gadda Caalu: Balaan Bilxiginnaan Abbiyyii Oromoo irratti.. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGadda Gadda Caalu: Balaan Bilxiginnaan Abbiyyii Oromoo irratti..
#GADDA_GADDA_CAALU: Balaan Bilxiginnaan Abbiyyii Masara Mootummaa keessa taa’ee Oromoo irratti habaqaalaa jiru kunoo guyyaa har’aa bu’aan isaa lubbuu ummata nagaa lamaa galaafatee hedduu madeessee kaaniis hidhaa galchee jira.
Gareen kaayyoo minilik galmaan gahachuuf fi Oromoo Cabsee humna dhoorkee gabroomsee bituuf carraaqaa jiru gareen Muummicha ministeeraa Itoopphiyaa Abiyoot, guyyaa karoora Nama 2 du’ee hawaasawa araddaa Burqaa nagayaan, Ganda Dhaallaa, sharaf Alishoo, Ruqiyaa Abdii Aliiti.
Ajjeechaan ummata nagaa kana irratti raawwate, osoo isaan hiirira mormii gaggeessaa jiranii akka isinitti hin fakkaanne, Osoo isaan salaata iidaa salaataa jiraniiti kan gochi gara jabeenyaa kun jala deemtota Bilxiginnaatiin isaanirratti gaggeeffamee jira.
Koronaa irratti labsii ugguroota garagraa irratti bahan ilaalchisee Ummanni baadiyyaa Fadis , Miidhagaa jiraatu osoo ibsaa fi hubannoo gahaa hin argatin, gochi gara jabeessi kun isaan irratti raawwatamee jira.
Wanni nama ajaa’ibsiisu, Ummata osoo waan tokkollee quba hin qabne kana #Ergamtoota Abiyyiitiin tarkaanfiin ajjeechaa irratti raawwatame kunneen of ittisuu fi ajjeechaa akkasii jalaa dheessuun Ummata gaara seene, qamni Bilxiginnaa biyya san jiru, Humna waraanaa konkolaataa lama Godina irraa Husseen Bariisootiin isaaniif ergame dabalatanii Ummata akka malee eega reebanii miidhaalee garagaraa irraan gahanii booda mana hidhaatti guuranii jiru.
Namni kun maqaan isaa Hayyi kan jedhamu yoo tahu guyyaa iidaatiin lubbuu nama lamaa galaafatee tumsaas mootummaa Abiyyii kan isa ergate irraa argatee qalbii takkaan ofii isaatii iida godhaa oole.
Via: Oromia Daily Voice